Reraka aho handeha haka aina - fanamarihana sy soratra ho an'ny fanontana
Reraka aho handeha haka aina - fanamarihana sy lahatsoratra
Reraka aho handeha hiala sasatra - lahatsoratra
Ny fihirana ny hiran'ny ankizy dia tena manampy sy manampy amin'ny torimaso. Ny vokany, ankoatra ny zavatra hafa, dia vokatry ny hoe tia ankizy mozika ny ankizy. Ny fanadihadiana lalindalina kokoa mikasika ny lohahevitra momba ny matory dia midika fa ny ankizy dia tonga tsotsotra fotsiny amin'ny alalan'ny mozika.
Ny mozika sy ny tononkira marevaka Miala sasatra aho
Ny ray aman-dreny tsy voatery ho manam-pahaizana mba hahafantaran'ny taranany ny tombontsoa maro ananan'ny gidro mandritra ny famangiana. Fa mba hahazoana antoka fa ny toerana dia farafaharatsiny farafahakeliny, ianao dia afaka manonta ny template noforonina ho an'ny namanao miaraka amin'ny fanamarihana sy ny lahatsoratra momba ny gidro kamboty. Ny ankizy lehibe kokoa koa dia afaka mandoko ny ravina amin'ny marika sy ny lahatsoratra!
Reraka aho, mandao sasatra,
Afeno ny maso roa:
Ray ô, avelao ny masonao
Mijanòna eo am-pandriako!
Nanao ratsy ve aho androany,
Aza mijery izany, ry Andriamanitro!
Ny famindram-ponao sy ny ran'i Jesosy
Manimba ny zava-drehetra.
Lavitra ahy, fankahalana sy fialonana,
Ny fitiavana sy ny hatsaram-panahy ato amiko.
Ampahafantaro ahy ny fahalehibiazanao,
Matokia, ry Andriamanitra ô, matokia;
Izay rehetra mifandray amiko,
Andriamanitra ô, aoka ho ao am-ponao,
Ny olona rehetra, lehibe sy kely,
Tokony hovidiana ianao.
Fanamarihana avy amin'ny hiran'ny ankizy Vizana aho no handeha miala sasatra rehefa misokatra ny tahirin-tsary
Kids Birthday Game Idea Iza aho?
Mandeha miaraka amin'ny takelako aho - fanamarihana sy lahatsoratra
Fiteny vahiny ho an'ny fifandraisana
Teny nalaina momba ny batisa
Ahoana no hanamafisako ny tena fiheveran'ny ankizy?